Kala bedel dukaanka : Kursiga gacmaha, Qalabka - Horumarinta (-55%)
Dharka xayawaanku waa xal fiican oo loogu talagalay dadka qiimeeya kaydka iyo hantida jeebkooda
Qibrad weyn oo ku saabsan iibinta noocyada ugu caansan ee dharka, kabaha, saacadaha, muraayadaha iyo boorsooyinka, waxaan awoodnaa inaan la kulmo dhadhanka xitaa macaamiisha ugu baahida badan.
Beddelka kabaha iyo dharka, kobcinta saacadaha, bacaha, ama xitaa noqdaan jeebka ugu caansan iyo muraayadaha muraayadaha ayaa lagu gartaa tayada wax soo saarka sare, naqshad sameynta iyo dhalashada daacad ah ee asalka ah. Taasna kuma mahadsna, iyaga oo aan ku xirneyn dareenka muusikada, ama isticmaalka raaxada ah ee aan loo baahnayn in laga yareeyo badeecooyinka lagu iibsado dukaamada shirkadaha ama si toos ah uga soo baxa kuwa ugu caansan iyo kuwa caanka ah.
Waxaanu nahay dukaanka oo ugu horreyn bixiya dhejisyada dharka moodada iyo khaaska ah, boorsooyinka iyo kabaha, laakiin dalabkayagu aad ayuu uga ballaaran yahay tan. Sidoo kale markaad nadiifinayso, waxaan ku siineynaa tayada gaarka ah ee tayo sare leh ee jewelery iyo boorsooyinka - dalabkooda buuxa waxaa laga heli karaa bogga internetka https://get2lux.cn/en/
Muraayadaha casriga casriga ah aad ayuu uga duwanaa awoowayaashii la isticmaalay ... in ka badan kun sano ka hor. Laakiin ma badalayso xaqiiqda ah in ujeedadoodu ay tahay mid ka hortag ah oo ka hortag ah dabaylaha qorraxda. Hawlgalkooda kale waa mid ku xiran qaabka, taas oo inta badan lagu daryeelo moodooyinka calaamadaha iyo muraayadaha indhaha muraayadaha naqshadeeyay oo si fiican loo yaqaan iyo noocyada la aqoonsaday caalamka.
Marka aad soo iibsanayso, waxaa muhiim ah in la xasuusnaado in marka hore la tixgeliyo tayada muraayadda difaaca, ma aha oo kaliya muuqaalka muuqaalka ama dhamaystirka ganaaxa. Tayada noocan oo kale ah, tusaale ahaan, joornaalka Ray Ban, muraayadda muraayadaha indhaha ah ee hadda ah kuwa ugu caansan aduunka, waa sababta aad u xiran kartid xitaa qorrax adag oo aanad ka welwelin indhahaaga. Isla mar ahaantaana, moodyadani waa kuwo aad u qurux badan oo qaabkooda caadiga ah, oo dib ugu soo celinaya muraayadaha dhaqanka iyo muraayadaha wareega kuwaas oo ahaa xukunka qiyaastii kala badhkii qarnigii ugu dambeeyay ee adduunka oo dhan.
Haddii aad xiiseyneysid ilbiriinka muraayadaha Versace, ama laga yaabee Camino, ama xitaa PORSHE, waxaan kugu martiqaadeynaa in aan kudhicno dalabyadeena
Marka ugu horeysa ee la soo iibsado sheyga iibsashada shaashadda waxay u muuqataa wax aan micno lahayn - haddii uusan aheyn mid asal ah, markaa boorso noocan oo kale ahi ma fulin hawsheeda qaaliga ah iyo tan sharafeedka. Nasiib wanaag waa qalad gebi ahaanba qaldan, sababta oo ah casriga casriga ah ee casriga ah ma aha mid ka duwan midka asalka ah. Haddii ay dhacdo in si fiican loo sameeyo sheyga, sida midda aan ku bixineyno, farqiga waa mid aan macquul ahayn xitaa indhaha la tababaray!
Sidaa darteed sababta aad u bixisay badeecada aad ka iibsan karto sicirka aad u hooseeya, adoo ah qaar ka mid ah tayada sare ee tayo sare leh iyo muuqaalkiisa Marka aad iibsaneysid shuruudaha LOEWE, Givenchy ama Celine Handbags, ama qaababka wax iibsashada ee biilasha sida Balenciaga iyo Michael Kors adigu ma bixinaysid calaamada soo-saaraha, laakiin waxaad weli heleysaa boorso casri ah oo casri ah oo lagu aqoonsan karo warshadaha casriga ah. Qeyb kasta oo ka mid ah Louis Vuitton ama Gucci gacanyar waa nooc ka dhigi doona dhadhanka xitaa kuwa ugu baahida badan, kuwaas oo doonaya in ay xiraan kaliya oo la xaqiijiyay oo la isweydiiyo, kuwaas oo sameeyn doona dareen ah marka makhaayad la tago ama marka lala kulmayo macmiilka. Waxaan kugu martiqaadeynaa boggayaga internetka, halkaas oo aad ka heli doonto dalabka iibka saxda ah https://get2lux.cn/en/119-handbags Inkasta oo la isticmaalayo jeebka caan ah ayaa sii kordhaya dhibaatooyinka - gaar ahaan haweenka - weli waxaa jira dad badan oo aamin ah dhaqanka oo ay isticmaalaan boorsada kaliya ee kaydinta lacag ama kaararka deynta. Si kastaba ha noqotee, labadaba noocyo cusub iyo nooc kasta oo ka mid ah dib-u-hagaajinta jeebka ayaa horeba waxoogaa hawlo kala duwan ah, sida qaybaha gaarka ah ee loo isticmaalo in lagu hayo stickers, si ay u sii wadaan lacagaha aan tooska ahayn ama, dhammaantood, dukumeentiyada. Boorsooyinka cusubi badanaaba waa kuwo aan biyuhu ahayn oo aad u badan oo u adkaysta abrasions, waxyeelo ama burbur. Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay nooca caanka ah iyo tarjumadooda. Tusaale ahaan, nuqul ka mid ah jeebka Christian Louboutin ka sameysan ee maqaar adag oo si fiican u diidaya marinka wakhtiga iyo xitaa ka dib sanado badan oo la isticmaalo, waxay weli u eg tahay cusub. Tani waxay quseysaa tiro ka mid ah noocyada kale, naqshadeeyayaasha iyo soo-saareyaasha kuwaas oo kasbaday sumcad heer caalami ah oo tayo sare leh ee maqaalkooda. Haddii aad xiiseyneyso dib u soo celinta Givenchy, kaas oo u adeegi doona sanado badan oo wuxuu noqon doonaa mid ku fiican xitaa macaamiisha ugu baahida badan, ka dibna waxaa lagugu martiqaadayaa inaad booqato dukaankayaga.
Inkasta oo la isticmaalayo jeebka caan ah ayaa sii kordhaya dhibaatooyinka - gaar ahaan haweenka - weli waxaa jira dad badan oo aamin ah dhaqanka oo ay isticmaalaan boorsada kaliya ee kaydinta lacag ama kaararka deynta. Si kastaba ha noqotee, labadaba noocyo cusub iyo nooc kasta oo ka mid ah dib-u-hagaajinta jeebka ayaa horeba waxoogaa hawlo kala duwan ah, sida qaybaha gaarka ah ee loo isticmaalo in lagu hayo stickers, si ay u sii wadaan lacagaha aan tooska ahayn ama, dhammaantood, dukumeentiyada.
Boorsooyinka cusubi badanaaba waa kuwo aan biyuhu ahayn oo aad u badan oo u adkaysta abrasions, waxyeelo ama burbur. Tani waxay si gaar ah ugu habboon tahay nooca caanka ah iyo tarjumadooda. Tusaale ahaan, nuqul ka mid ah jeebka Christian Louboutin ka sameysan ee maqaar adag oo si fiican u diidaya marinka wakhtiga iyo xitaa ka dib sanado badan oo la isticmaalo, waxay weli u eg tahay cusub. Tani waxay quseysaa tiro ka mid ah noocyada kale, naqshadeeyayaasha iyo soo-saareyaasha kuwaas oo kasbaday sumcad heer caalami ah oo tayo sare leh ee maqaalkooda.
Haddii aad xiiseyneyso dib u soo celinta Givenchy, kaas oo u adeegi doona sanado badan oo wuxuu noqon doonaa mid ku fiican xitaa macaamiisha ugu baahida badan, ka dibna waxaa lagugu martiqaadayaa inaad booqato dukaankayaga.
Sida walxaha dharka maalin kasta, kabaha badanaa waa la iska indho tiraa ama la dayacay; Inta badan, haweenku waxay bixiyaan dareenka ugu weyn ee ah in kabaha ay ku ciyaaraan dharka, boorsooyinka ama alaabta. Waxaannu ku tallaabsanay dhaqanka iyo waayo-aragnimada, waxaan go'aansannay inaan soo saarno dalab, halkaasoo kabaha kobcinta ay noqon doonto qeyb muhiim ah oo sawirka ah, iyo tirada alaabooyinka, naqshadeeyayaasha iyo soo-saareyaasha ayaa qancin doona macaamil kasta, qof walbana wuxuu helayaa wax shakhsi ah.
Cunto kasta oo la heli karo ee kabaha Coca & Cola, kabaha ka soo jeeda Dior, Chanel ama Casadei, ayaa lagu sameeyaa habka heesaha iyo habdhaqanka, oo aan ka duwanayn asalka dhabta ah. Calaamadaha kabaha kama duwana asalka ay asal ahaan ka soo jeedaan, iyo duruufaha iyo iska-caabbinta qalabka ay ka sameeyeen, waxay ogolaanayaan isticmaalka dheeraadka ah ee aan dhibka lahayn. Ma jiraan wax isbeddel ah haddii aad ka iibsaneyso Prada-replica ama kabaha ay ka mid yihin sida: LV, Christian Louboutin, Gucci ama Yeezy, waxaanu u damaanad qaadnaa kabo tayo sare leh iyo caalamiyadooda. Kuwani waa badeecooyinka, kuwaas oo aan ku farxi doonin dadka oo kaliya xajistooda, laakiin waxa ka sarreeya, waxay noqon doonaan kaligood oo raaxo leh.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato dukaankeenna oo aad barato faahfaahinta dalabaadka https://get2lux.cn/en/113-boots
Maahmaah la yaqaan ayaa sheegay in dharka aan la samayn ninka, laakiin qarnigii 21aad ma ahan wax dhab ah. Waqtigan xaadirka ah ee dharka waa calaamad u ah xaaladda qofka, xirfaddiisa, maalkiisa ama xitaa dhaqanka uu isagu leeyahay. Polesku waxay kaloo daryeelaan dharkooda, waxayna ku jiri karaan noocyo kala duwan oo dhar ah oo ka mid ah ururada ugu fiican ee la yaqaan.
Makhaayadeena waxaa laga helaa alaabooyinka laga helo moodooyinka ugu caansan, kuwa ugu caansan iyo kuwa soo saarayaasha ugu fiican iyo naqshadeeyayaasha. Kuwani waxay ka mid yihiin kuwa kale: Giorgio Armani iyo Burberry replica, laakiin sidoo kale Gucci, Prada iyo Chanel. Shirkadeena hodanka ah waxay dammaanad qaadaysaa, in qof kastaa uu wax ku heli doono, labadaba marka loo eego dheemanka - muuqaalka dharka, iyo sidoo kale arrimaha maaliyadeed, sababtoo ah qiimaheena ayaa aad uga hooseeya kuwa asalka ah. Dhamaan Louis Vuitton yoolalka - shaati, shawls, boogaha; Valentino - suunka, shirarka; ama Fendi - dhidid iyo dharka; iyo naqshadeeyaha kale, waxay haystaan ​​fasal heer sare ah oo tayo leh, muuqaal xarrago leh, raaxo ee xirashada iyo, ka sarreeya, sharafta lahaanshaha.
Mira-dharka waa mid gaar ah oo aan aad u qancin dharkaaga, sababtoo ah wuxuu dooranayaa inuu dharka u soo baxo si aad u adag. Muhiim maaha inay tahay asalka dhabta ah ee daaqada dukaamada dahabka, ama, tusaale ahaan, bvlgari copy-ka oo aad naga iibsan karto.
Farqiga kaliya ee u dhexeeya asalka iyo waxtarka, oo aad arki karto marka ugu horeysa (iyo furitaanka ugu horeeya ee boorsada!), Waa qiimaha. Noocyada dahabiga ah ee Chanel, Hermes ama Dior waxay noqon kartaa xitaa waqtiyo badan oo ka raqiisan asalka, taas oo si toos ah u fududeyneysa macaamiisha caadiga ah. Uma baahnid inaad mushahar ku qaadato si aad u iibsato giraan aan fiicnayn, taas oo muujinaysa sida aad u kala go '
Taa baddalkeeda, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad soo booqato dukaankeena oo aad dooratid noocyada dahabiga ah ee aad jeceshahay ugu badan oo aad kuugu fududaan karto boorsadaada.
Haddii aad rabto inaad aragto waxa aan u fidin karno si faahfaahsan, waa inaad soo booqataa boggeena dukaanka ee https://get2lux.cn/en/121-jewelery Xirfadaha ayaa ah arrin adag oo lagu kala saaro. Waxaa loo tixgelin karaa jewelery, accessories, ama qayb ka mid ah gallantry. Iyadoo aan loo eegin, waxay weli yihiin kuwo aad u muhiim ah ma ahan oo kaliya dharka, laakiin muuqaalka laftiisa, iyo dad badan oo weli ku dadaalaya inay xirto kabaha casriga ah iyo xarrago leh. Taasi waxay noqon kartaa mid asal ahaan ka soo jeeda soo saaraha, ama farsamo ahaan loogu talagalay in lagu ilaaliyo saacadda Hublot ama Rolex, in badan oo badanaa lagu arko dukaamada Polish. Laakiin waxaa jira muuqaal ah, waa maxay xirfadlaha xirfadlaha ah uu ka kooban yahay, waxa tilmaamaya iyo sida la mid ah asalka dhabta ah. Haddii aad rabto inaad aragto, waxaan kugu martiqaadeynaa dukaankeena - waxaan leenahay cajalado dhowr ah oo badan oo ka socda TAG Heuer classic, iyada oo loo marayo sumadaha sida Richard Mille ama BREITLING, loo yaqaan 'U-boat' iyo Emporio Armani. Waxaan sidoo kale heysanaa, caan ku ah kalsoonida, Cartier ResPlus, iyo moodhiyaal badan oo badan oo kale oo lagu tilmaamo si sax ah u shaqeynta iyo feejignaanta si faahfaahsan. Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso dukaankeenna, si aad u ogaato shuruudaha iibsashada iyo inaad aragto dalabka
Xirfadaha ayaa ah arrin adag oo lagu kala saaro. Waxaa loo tixgelin karaa jewelery, accessories, ama qayb ka mid ah gallantry. Iyadoo aan loo eegin, waxay weli yihiin kuwo aad u muhiim ah ma ahan oo kaliya dharka, laakiin muuqaalka laftiisa, iyo dad badan oo weli ku dadaalaya inay xirto kabaha casriga ah iyo xarrago leh. Taasi waxay noqon kartaa mid asal ahaan ka soo jeeda soo saaraha, ama farsamo ahaan loogu talagalay in lagu ilaaliyo saacadda Hublot ama Rolex, in badan oo badanaa lagu arko dukaamada Polish.
Laakiin waxaa jira muuqaal ah, waa maxay xirfadlaha xirfadlaha ah uu ka kooban yahay, waxa tilmaamaya iyo sida la mid ah asalka dhabta ah. Haddii aad rabto inaad aragto, waxaan kugu martiqaadeynaa dukaankeena - waxaan leenahay cajalado dhowr ah oo badan oo ka socda TAG Heuer classic, iyada oo loo marayo sumadaha sida Richard Mille ama BREITLING, loo yaqaan 'U-boat' iyo Emporio Armani. Waxaan sidoo kale heysanaa, caan ku ah kalsoonida, Cartier ResPlus, iyo moodhiyaal badan oo badan oo kale oo lagu tilmaamo si sax ah u shaqeynta iyo feejignaanta si faahfaahsan.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso dukaankeenna, si aad u ogaato shuruudaha iibsashada iyo inaad aragto dalabka